भारत भ्रमण उपलब्धिमूलक रह्यो : पर्साका पूर्वसांसद अजय चौरसिया| Yatra Daily
भारत भ्रमण उपलब्धिमूलक रह्यो : पर्साका पूर्वसांसद अजय चौरसिया
यात्रा डेली असोज २७, २०७८ बुधबार
वीरगञ्ज, २० असोज । नेपाली कांग्रेसका पर्साका पूर्वसांसद अजय चौरसियाले आफूहरुको भारत भ्रमण उपलब्धिमूलक रहेको सुनाएका छन् । नेपालप्रति भारतीय जनता पार्टीको सकारात्मक प्रतिक्रिया पाएको पनि उनले सुनाएका छन् ।
यात्रा डेलीका सञ्चालक एवम् प्रबन्ध निर्देशक राम सर्राफसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले आफ्नो पार्टी पनि नेपाल र भारत दुई देशबीच सुमधुर सम्बन्ध बनाउन चाहेको सुनाए । उनले भारत भ्रमणको क्रममा आफूले तुईन प्रकरणको विषय पनि उठाएको स्मरण गराए ।
उनले भारतको तल्लो तहबाट गल्ती भएको हुनसक्छ भनेर यसबारे सहज रुपमा भारतको तर्फबाट छानबिन होस भनेर आफूले विदेशमन्त्री जयशंकरसँग कुरा उठाएको स्मरण गराए । उनले जयसिंह धामी प्रकरणमा भारतको स्टेटमेन्ट आउनुपर्ने कुरा उठाएको सुनाए । भेटवार्ताको क्रममा सीमा विवादको कुरा पनि उठाएको सुनाए ।
पर्साको श्रीपुरपचगावाँमा एमालले गरे जयसवालको पुतला सहित विरोध कार्यक्रम
नेकपा एमाले पर्साको ११ वटा स्थानीय तहमा अधिवेशन सम्पन्न
पछिल्लो २४ घण्टामा ६ सय ६६ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि
४० लाख जनसङ्ख्या भएको चीनको एक सहरमा लकडाउन लागू
नेपालमा डान्स च्याम्पियन हुने, बिजेतालाई नगद २५ लाख पुरस्कार
नकारात्मक सोचाई, रिस, दम्भ, घृणा आदिले पनि मुटु रोग लाग्छ – डा. ओम मूर्ति अनिल
परनिर्भर निर्यात कहिलेसम्म ? - भारतीय नीतिले पार्ने प्रभावमा सधैं बेवास्ता
‘डुबेर मृत्यु हुने घटना न्यूनीकरण गर्न कानून ल्याउँदैछौं’
जसपा फुटाउन सक्ने कसैको हिम्मत छैन् : मनिष सुमन